Yakhelwe ngo-2017, le villa eyilwe kakuhle kwisiseko se-Andes yindawo entle yokuchitha iholide kwingingqi yewayini yase-Uco Valley. Ime kufuphi neAlfa Crux Winery ephumelele ibhaso, le casa inamagumbi okulala ama-3 e-en-suite kunye negumbi leendwendwe elahlukileyo elinamagumbi amabini okulala kunye nebhafu. Iqula kunye nequincho yangaphandle ibonelela ngesetingi egqibeleleyo yokuqubha ukuya kuthi ga kwivino yakho kunye ne-asado. Kufutshane kukho ukukhwela ihashe, amanzi amhlophe e-rafting, ukuloba kwaye ngokuqinisekileyo ukungcamla kwewayini eninzi.
Yimbono yeeAndes ejonge isidiliya esihle. Ikude kwaye iyindawo entle yokuqhawula ngelixa ufumana ukutya kunye newayini.
IArgentina iyaziwa nge-Asado, iVino kunye neBhola. Uyakubanjwa ngabasebenzi be-Alfa Crux Hospitality abakhokelwa ngu-Edward Holloway. Banokukulungiselela izinto ezininzi kwangaphambili okanye wakuba ufikile. Sinokuzisa u-Asado kuwe kunye nabasebenzi abavela kwi-Winery ye-Alfa Crux abaya kulungiselela isidlo endlwini. Indlu yethu sayiqala ngo-2017 ngesidlo sangokuhlwa abasiphekela sona sasimangalisa. Kukho ukuloba, ukukhwela ihashe kunye ne-rafting yamanzi amhlophe ngokuxhomekeke kwixesha olindwendwelayo. Kukho ne-masseuse enokuthi ilungiselelwe ukutyelela indlu.
IiWineries: Kukho ii-wineries galore kwiintlambo ezi-3 zaseMendoza, uninzi lwazo luya kubonelela ngesidlo sasemini sesidlo sangokuhlwa. Sicebisa ukuba ubeke indawo kwaye ucwangcise kwangaphambili. Ngaphandle kwe-Alfa Crux, i-Zuccardi elandelayo esondeleyo eyakha i-winery entle kunye nevenkile yokutyela emangalisayo nje imizuzu eli-10 ukusuka kwindlu yethu.
Amakhonkco kwezinye iiBodegas esizonwabele zikwincwadana yendlu esiza kuyibonelela, nangona kunjalo kukho ezintsha eziphuma ngalo lonke ixesha ke cebisa ukuba ujonge iisayithi zakho ezizithandayo kwimidiya yoluntu ukuze ufumane izimvo.
Iindawo zokutyela: Uninzi lweendawo zokuthengisa iwayini ezibandakanya ezi zingentla zineendawo zokutyela kwaye ezininzi ngamava okutya abalaseleyo. Amava okutyela asusela kwilaphu letafile emhlophe ephezulu ukuya kwindlu yosapho eguqulelwe kwindawo yokutyela enokupheka kwenyani ekhaya ke kukho into yomntu wonke. Ungabelana ngezinto ozikhethayo kunye neqela leAlfa Crux kwaye banokunceda ekufumaneni indawo elungileyo kunye nokunceda ngogcino.
I-Eugenio Bustos Basics: Idolophu ekufutshane yimizuzu emi-5, ohamba ngayo ukuya kwindlu ebizwa ngokuba yi-Eugenio Bustos. Yidolophu ye-gaucho yase-rustic kodwa inezinto ezibalulekileyo, iBhanki ene-ATM kwibala ledolophu (ikona ye-Arenales kunye no-Bernardo Quiroga), ivenkile enkulu yegrosari ebizwa ngokuba yiVea (ikona iSan Juan Bosco kunye ne-2nd ka-Epreli), isikhululo segesi ngokulandelayo. ukuya eVea, ikhemesti kunye nesibhedlele (ngethemba akufuneki) kwikona esezantsi-ntshona yesikwere sedolophu ibhloko esuka ebhankini. Kukwakho neevenkile ezikhethekileyo ezifana nevenkile yokubhaka nenyama edolophini. Kuya kufuneka uyazi ukuba abantu baseArgentina baphumla kwaye iivenkile zivale phakathi kwentsimbi yesi-5 ke ngoko cwangcisa ukutyelela kusasa okanye ngorhatya ukuze ufumane izinto ezibalulekileyo.